Saldhigga Tareenka ee Altunizade | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSaldhigga Altunizade Metrobus ayaa la Balaariyey
15 / 01 / 2020 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
altunizade metrobus station ayaa la ballaariyey
IMM waxay dhistay goob cusub oo degitaan ah iyo jaranjarada si loo yareeyo cufnaanta rakaabka ee Altunizade Metrobus Station. Markii la furay Yamanevler - Çekmeköy Metro, tirada maalinlaha ee rakaabka ee Altunizade waxay ka korodhay 17 kun ilaa 35 kun.
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM), oo ah shirkad hoos timaada agaasinka guud ee IETT Shirkadaha, si loo yareeyo cufnaanta idaacadda ayaa dhistay 300 mitir murabac oo dheeraad ah oo dhul gariir ah.
Sidan, tirada gawaarida soo ag dhawaa xarunta ayaa laga kordhiyay 5 ilaa 9. Intaa waxa u dheer, jaranjaro cusub ayaa la dhisay taas oo rakaabku ay ka soo bixi karaan aagga boostada oo ay gaari karaan xarunta tareenka dhulka hoostiisa. Intaa waxaa u dheer, 5 xaraash, 1 tikitikoor iyo 2 soo celiyayaal xaqiiq ayaa lagu daray xarunta si loo fududeeyo soo gelitaanka iyo bixitaanka muwaadiniinta.
Saldhigga Altunizade Metrobüs wuxuu bilaabay inuu u adeego laba jeer rakaab badan sanadkii la soo dhaafay iyadoo loo adeegsaday Yamanevler - Çekmeköy Metro Line. Isku-darka khadka metrooga ee xarunta, celceliska tirada maalinlaha ee rakaabka ayaa kordhay 2 boqolkiiba, laga bilaabo 105 kun ilaa 17 kun. Kordhinta rakaabka awgeed, aagga sugitaanka iyo jaranjarada ayaan ku filnayn.
Route Route ayaa kordhiyay
Ketenova Bridge ayaa ku ballaarantay Nazilli
12 Meter 'Expanded Bridge'
Khadka Bosphorus ee u dhexeeya Altunizade iyo Etiler
Mecidiyeköy-Altunizade line line gaariga wadada (Video)
Gudiga Duulista iyo Gaadiidka ee Istanbul iyo 12ka May 2012 ee Üsküdar Altunizade Culture…
Isticmaalka Altunizade metrobus